के सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाले बिहे गरेकै हुन् त ? के हो वास्तविकता जान्नुहोस ? - jagritikhabar.com
वलिवूड अभिनेता सलमान खान, आजको समयमा सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सायदै यस्तो कोही होलान् जसलाई यो नाम थाहा नहुन सक्छ । किनभने सलमान खानको सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकतर्फी नाम छ, जसका कारण आजको समयमा उनलाई सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीले…
वलिवूड अभिनेता सलमान खान, आजको समयमा सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सायदै यस्तो कोही होलान् जसलाई यो नाम थाहा नहुन सक्छ । किनभने सलमान खानको सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकतर्फी नाम छ, जसका कारण आजको समयमा उनलाई सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीले चिन्छ ।
अहिलेको समयमा सलमान खानसँग पैसाको कुनै कमी छैन किनभने सलमान खानले हिट फिल्म दिएर धेरै नाम र पैसा कमाए, जसका कारण उनले आफ्नो जीवन निकै विलासी ढंगले बिताएका छन् । सलमान खान सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विवाहलाई लिएर सधै चर्चामा रहन्छन् । अहिलेको समयमा फेरि यस्तो भएको छ किनकी हालै सलमान खानको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएको छ जसमा उनी दुलहाको लुगामा बेहुलीलाई औँठी लगाइराखेका छन् । यो तस्विरमा पनि देख्न सकिन्छ । सलमान खानको बेहुलीको कुरा गर्दा उनी अरु कोहि नभई बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हुन् ।
सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाको बिहेको तस्विरहरु तिब्र रुपमा भाइरल भइरहेका छन् जसका कारण सलमान खानले कसैलाई नजानीकनै सोनाक्षी सिन्हासँग बिहे गरेको बताउँछन् । सोनाक्षी सिन्हा र सलमान खान अहिले आफ्नो विवाहको तस्विरका कारण चर्चामा छन्, जसका कारण अहिले सबैले उनीहरुको चर्चा गरिरहेका छन् ।
हालै सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाको विवाहको एउटा तस्विर सार्वजनिक भएको छ, जसमा सलमान खानले अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हालाई औँठी लगाएका छन् भने सोनाक्षी सिन्हाले पनि सिंदूर लगाएकी छन् । यो तस्बिरको सत्यताको कुरा गर्दा यो कम्प्यूटरले सम्पादन गरेको तस्विर हो । यसको मतलब सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाले विवाह गरेका छैनन् । सोनाक्षी सिन्हा र सलमान खानको विवाहका यी तस्विरहरू वास्तविक नभएको पनि हामीले पूर्ण अनुसन्धानपछि थाहा पाएका छौं ।